quruxda American Afrika: waxa maalin maalmaha ka mid ah in aan noqday xiddig ma aha, dadka caanka ah ha ka yimaadaan waxba iyo warkiisii ​​aan la macmalay karo "Dad badan ayaa jecel yihiin in ay ka hadlaan dadka caanka ah loo eegin ay asal ahaan ama ay safarka "
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 20, 2019 00: 00 No Comments
Hal wax ayaa danaynaya: caanka xiddigga, bar bar. Tiro yar ayaa xiiseynaya safarka xiddigaha ay yihiin taageerayaasha. Kuwa kuwa garanaya sida loo xasuusto, kuwa awood u leh inay dib u riixaan illaaladooda ama xaddidaadkooda, tanina waxay ku saabsan tahay: yaa xusuusan kara jaantuskan? Yaa weli aqoonsan kara ilmahan quruxda badan? tani waa oo isagu magaca ??
Cadeynta gargoyles ee dhismayaasha diinta: tan iyo markii uu dabku ka kacay Notre Dame Cathedral ee Paris bishii Abriil 16, 2019, dadka qaar waxay isweydiinayaan su'aasha ah sababta jiritaanka gargoyles ee dhismayaasha diinta
Sep27 03: 17